Horudhac: Liverpool vs Leicester City… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ka dhacaya Garoonka Anfield) – Gool FM
(Liverpool) 22 Nof 2020. Axadda caawa waxaa dhici doona kulan adag oo u dhexeeya kooxda haysata Premier League iyo Kooxda doonaysa inay hoggaanka u qabato Premier League, iyadoo Liverpool oo kaalinta saddexaad ku jirta ay Anfield ku soo dhaweyneyso kooxda Leicester City.
Kooxda Jurgen Klopp oo dhaawacyo ay la degeen ayaa doonaysa inay dhibaatadaas ka gudubto oo ay garaacdo Foxes, halka naadiga Leicester City oo xawaare sare ku socota ay doonayso inay Anfield ku garaacdo Reds isla markaana ay caawa la wareegto hoggaanka horyaalka Premier League.
Taariikhda: Axad 22 Nof 2020
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 10:15 Habeennimo xilliga geeska Afrika.
Kabtanka Kooxda Liverpool ee Jordan Henderson ayaa dhaawac gumaarka ah ku seegi doona kulankan, kaasoo ku soo gaaray waajibaadka xulkiisa qaran.
Mohamed Salah ayaa isaguna karaantiil ku jira kaddib markii laga helay Korona Fayras, waxaana uu seegi doonaa kulanka caawa.
Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Thiago Alcantara iyo Virgil van Dijk ayaa sidoo kale ka maqan Reds, laakiin Fabinho iyo Alex Oxlade-Chamberlain ayaa kulankan ku lug yeelan kara.
Garabka midig ee daafaca Leicester City ee Timothy Castagne ayaa diyaar ah kulankan kaddib markii uu dhaawac muruqa ah ku seegay afar kulan.
Daafaca dhexe ee kooxda Foxes, Wesley Fofana ayaa sidoo kale diyaar u ah inuu wajaho Liverpool.
>- Liverpool ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) sagaalkeedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo ay garoonkeeda ku soo dhoweysay naadiga Leicester City, waxaana ay guuleysatay todobo kulan, tan iyo markii ay saddex guuldarro oo xiriir ah ku soo gaartay garoonka Anfield intii u dhexeysay 1997 ilaa 2000.
>- Foxes ayaa kaliya qaadatay hal dhibic oo ay ka heshay lixdii kulan ee la soo dhaafay oo ay la ciyaareen Reds, guushoodii ugu dambeysay ee kulankaan waxay ahayd ciyaartii ay 3-1 kaga adkaadeen Liverpool oo ka dhacay King Power Stadium bishii Febraayo ee 2017.
>- Liverpool ayaa sameyn karta rikoodh toos ah ee koox ahaan horyaalka kaasoo ah 64 kulan oo garoonkeeda ah oo aan laga badinin caawa, 63-dii kulan ee ay ciyaareen iyagoo aan wax guuldarro ah la kulmin waxaa soo afjartay Leicester bishii Janaayo ee sanadkii 1981-kii.
>- Reds ayaa sidoo kale barbareysay rikoorka gooldhalinta kooxda ee 38 kulan oo isku xiga oo garoonkeeda ah, horay waxaa loo dhigay intii u dhaxeysay May 1967 iyo February 1969.
>- Diogo Jota ayaa noqon kara ciyaaryahankii ugu horreeyey ee gool dhaliya mid kasta oo ka mid ah afartiisii kulan ee ugu horreeyay ee Liverpool uu ugu ciyaaray garoonkeeda Anfield.
>- Leicester ayaa sameysay rikoorkeedii ugu fiicnaa kaddib siddeed kulan oo xilli ciyaareed sare ah, iyadoo leh lix guul iyo 18 dhibcood.
>- Foxes ayaa ku socota lix guul oo isku xiga tartammada oo dhan, iyadoo dhalisay 15 gool, lagana dhaliyay Labo.
>- Gool uu dhaliyo Jamie Vardy Axadda caawa ayaa xaqiijin doonta inuu la mid noqdo Thierry Henry rikoorkiisa Premier League ee gooldhalinta shan kulan oo isku xigta oo marti ah (Away).
>- Brendan Rodgers ayaa laga badiyay labadii kulan ee Premier League ee uu ka horyimid Liverpool tan iyo markii uu ka tagay kooxda sanadkii 2015-kii kaddib in ka badan seddex sano oo uu leylinayay.
Horudhac: Leeds United vs Arsenal… (Kooxda Arteta oo booqan doonta garoonka Elland Road)